Pesta hatrany | 102 KARA
Ity resaka pesta ity indray moa izao no malaza eto amin’ny tanàna.
Samy miseho miezaka eo amin’ny fandrasan’andraikitra hamongorana ny valan’aretina ny rehetra.
Izao farany izao dia ny vondrona MAPAR tao amin’ny Firaisana faha-II sy faha-V no nandraraka fanafody sy nanadio ny teny aminy.
Mifanilaka amin’ny fandraofana ny fako eto amin’ny tananan’Antananarivo ny Fitondrana foibe sy ny kaomina. Nohazavain’ mpanolon-tsaina ao amin’ny tananan’Antananarivo fa ny Minisiteran’ny rano no tompon’andraikitra tanteraka amin’ny fanalàna ny fako, ary tsy manana subvention omena ny kaomina ny Fanjakana . Ny ao amin’ny kaomina anefa nilaza fa raha omena azy io subvention io dia HERINANDRO raha ela indrindra dia MADIO ny tanàna manontolo.
Vao tsy ela akory izao ny Praiministra no nilaza fa voafehy ny aretina pesta, nefa dia voatery nilaza indray izy fa mbola ahitàna soratr’aretina amin’izao fotoana izao.
Ary vao omaly no nifanome fotoana tamin’ny mponina tetsy amin’ny fokontranin’ny Lalamby, etsy ANTOHOMADINIKA Ingahy Praiministra. Efa vonona tamin’ny kofafa sy ny harona ny vahoaka hatramin’ny VALO ORA MARAINA. Niandry ka niandry ary tsy tonga ny Praiministra raha tsy tamin’ny tamin’ny IRAY ORA LATSAKA FAHEFANY ATOANDRO . Folo minitra no naharetany teo dia lasa izy.
Dia hoy ny vahoaka hoe : toy ny niandry mpanjaka mihintsy. Ao ny sasany nilaza hoe : « niandry vazaha didy maso » ary mba TSY RAZAKA aloha no nanandrasana, hoy ny hafa satria mba tonga ihany izy….
5 octobre 2017 - 13 h 25 min Social 228 vues